इलाममा सात योङहाङको नेतृत्व, को-को हुन् ? काे के गर्छन् ? - Nayabulanda.com
इलाममा सात योङहाङको नेतृत्व, को-को हुन् ? काे के गर्छन् ?
स्पर्श अतित २२ असार २०७७, सोमबार २०:४४ 1738 पटक हेरिएको
इलाम : इलाम जिल्ला लिम्बू समुदायको उलेख्य बसोबास रहेको जिल्ला हो । अनेक जातजाति, भाषाभाषी र संस्कार संस्कृतिको संगमता रहेको इलाम जिल्लामा लिम्बू समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । लिम्बूहरु योङहाङ, नेम्बाङ, थेगिम, येक्तेन, फागो, मादेन, फत्र, पत्रे, सेलिङ, ताम्लिङ, खुदाङ, लावती, खापुङ, सम्बाहाङफे, वधोहाङ, इदिङगो, थाम्सुहाङ, सावादेन, थेवे, आङदेम्बे, चेम्जोङ, सोङमी, लावुङ, लिङदेन, माबोहाङ आदिमध्ये योङहाङहरुकै बाक्लो बसोबास रहेको छ । योङहाङहरु इलामको एकतप्पा, फुएतप्पा, लुम्दे, गजुरमुखी, इभाङ, बाँझो, चुलाचुली, महमाई, दानाबारी, चिसापानी, गोर्खे, मंगलबारे, धुसेनी आमचोक लगायतका क्षेत्रमा उलेख्य मात्रामा पाइन्छन् । बाहुल्यतासँगै योङहाङहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनितिक जीवन पनि अर्थपूर्ण र सम्मानजनकनै रहेको पाइन्छ । खासगरी यसरी बाहुल्यता रहेको योङहाङहरुले राजनितिक क्षेत्रमा उच्च पदारोहन अहिलेसम्म गरेको नपाएता पनि स्थानीय स्तरको सामाजिक क्षेत्रमा भने उलेख्य रुपमा नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । यहाँ मैले चर्चा गर्न खोजेको विषय वर्तमान समयमा इलाम जिल्लामा योङहाङहरुले सम्हालिरहेको ७ नेतृत्वको हो ।
को–को हुन् ? काे के गर्छन् ?
१. यामप्रसाद योङहाङ (अध्यक्ष, बुध्दिचाल संघ इलाम)
यामप्रसाद याेङहाङ : अध्यक्ष, बुध्दिचाल संघ इलाम/केन्द्रीय उपाध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
यामप्रसाद योङहाङ पेशाले कानुन व्यवसायी हुन् । एकदशक यता जिल्ला अदालत इलाममा अधिवक्ताको रुपमा क्रियाशिल छन् । कानुन व्यवसायसँगै उनले सामाजिक र राजनितिक संस्थामा सम्बद्ध भई ती संस्था, संगठनहरुको नेतृत्वको भूमिका निभाईरहेका छन् । लिम्बूहरुको जातिय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ इलामलाई झण्डै आधा दशक नेतृत्वको रुपमा सम्हाली लिम्बू समुदायको लागि अतुलनीय योगदान गरेका छन् र गरिरहेका छन् । हाल उनी किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् । यो भन्दा अघि केन्द्रीय सदस्य र इलाम जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् ।
यता राजनितिक संगठन क्षेत्रमा पहिचानवादी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको इलाम जिल्ला सचिवको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । संघीय तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीको संस्थापक जिल्ला सचिव रहेका योङहाङ पछि संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी एकताभएपछि बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको पनि जिल्ला सचिव नै सम्हाले । पछी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँगको एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टीको पनि जिल्ला सचिव नै रहे । अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको एकतापछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पनि औपचारिक जिल्ला समायोजन घोषणा नभएपनि जिल्ला सचिव नै छन् । उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनी लिम्बूहरुमा कानुनमा अब्बल मानिन्छन् । उनी योङहाङ समाज, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च लगायत धेरै संघ, संस्थाका कानुनी सल्लाहकार हुन् ।
उनी बुद्धिचाल खेलमा समेत सक्षम मानिन्छन् । बद्धिचाल संघ इलामको अध्यक्षको नेतृत्व सम्हालिसकेका उनी बुद्धिचाल खेलका राष्ट्रिय खेलाडी हुन् । उनले आदिवासिहरुको क्षेत्रमा सहजकर्ताको रुपमा काम गरिरहेका छन् । जिल्ला स्थित हुने आदिवासिजन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा प्रशिक्षकको रुपमा उनको भूमिका उलेख्य रहेको पाइन्छ ।
२. पञ्चवहादुर योङहाङ (अध्यक्ष, योङहाङ समाज इलाम)
पञ्चवहादुर योङहाङ : अध्यक्ष, योङहाङ समाज इलाम
पञ्चवहादुर योङहाङ पेशाले स्वास्थ्यकर्मी हुन् । इलामको फाकफोकथुम एकतप्पमा जन्मिएका उनी संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक पश्चात् हाल वडा सदस्य पदको जनप्रतिनिधि समेत हुन् । उनी योङहाङ समाज इलामका अध्यक्ष हुन् । उनले थुप्रै संघ, संस्थाहरुमा आबद्ध भई काम गरिरहेका छन् । किरात धर्ममा आश्थित उनले पछिल्लो ५ वर्ष एकतप्पामा किरात माङहिम (मन्दिर) निर्माणमा आफ्नो व्यस्त समय खर्चाए । श्री सिद्ध किरात हाङसाम युमा माङहिम एकतप्पाका अध्यक्ष उनले किरात समुदायको लागि हालसम्मको विश्वमै ठूलो माङहिम निर्माण गर्न नेतृत्व गरी सम्पन्न गरे ।
उनले गाउँको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत सम्हाली सकेका छन् । उनी कम्युनिष्ट निकट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सम्बद्ध छन् । उनले औपचारिक रुपमा अध्ययनलाई भने सि.एल पश्चात् रोकेका थिए तर प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सि.एम.ए.पढेका छन् ।
३. दीपककुमार योङहाङ (अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान मञ्च इलाम)
दीपककुमार योङहाङ : अध्यक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान मञ्च इलाम
दीपक कुमार योङहाङ पेशाले युवा उद्यमी हुन् । फाकफोकथुमको फुएतप्पामा जन्मेका उनी हाल आफ्नै गाउँमा कृषि पेशामा आश्रित छन् । उनी संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघिय लिम्बुवान मञ्च इलामका अध्यक्ष हुन् । उनले पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नं. २ बाट सभाषद् भई चुनावमा पूर्व सभामुख सुवास चन्द्र नेम्बाङको प्रत्यासी समेत भएका थिए ।
युवावस्थाको सुरुमा उनले जिल्ला र गाउँमा नृत्य निर्देशक भएर एक दशक विताए । आर्थिक अभावका कारण वैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा खाडी मुलुकमा गई आधा दशक विताए । हाल उनी गाउँ फर्की समाजसेवासँगै राजनिति अंगालेका छन् । खासगरी उनी युवा व्यवसायी भएर परिचय दिन चाहन्छन् । उनी योङहाङ समाज इलामका सचिव हुन् । स्थानीय स्तरमा उनले आदिवासी जनजाति महासंघ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायतका संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । गाउँका क्लव, संस्था, समूहहरुमा युवाहरुलाई एकीकृत गरी समाजमा उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । उनले प्लस टु सम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् ।
४. राम योङहाङ (अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फाेनिज इलाम)
राम योङहाङ : अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फाेनिज) इलाम
राम योङहाङ पेशाले सञ्चारकर्मी हुन् । विगत १३ वर्षअघि सञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरेका योङहाङ पछिल्लो समय एक संचार उद्यमीका रुपमा क्रियाशील छन् । उनले बुलन्द आवाज मिडिया प्रा.लि. स्थापना गरी इलाममा पहिलोपटक अनलाइन पत्रिका नयाँ बुलन्द डटकम संचालन गरिरहेका छन् । उनी नयाँ बुलन्द डटकमा सम्पादक हुन् । त्यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित सौर्य राष्ट्रिय दैनिक र भाषिक पत्रिका तान्छोप्पो मासिकमा समेत इलाम संवाददाताका रुपमा कार्यरत छन् । उनले विगतमा इलाम एफएम इलाम, नागरिक एफएम झापा, मोफसल साप्ताहिक मोरङ, पूर्व सन्देश दैनिक झापा, पिपुल्स टाइम्स दैनिक झापा, इलाम पोष्ट दैनिक इलाम, इक्ला साप्ताहिक इलाममा समेत काम गरेका थिए ।
उनले सञ्चार क्षेत्रसँगै सामाजिक तथा राजनितिक क्षेत्रलाई समेत कहिल्यै आफूबाट अलग गराउन सकेका छैनन् । उनी नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) इलामका अध्यक्ष, प्रेस नेपालका केन्द्रीय सदस्य, लिम्बू पत्रकार संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ इलामका सचिव, योङहाङ समाज, इलामका संस्थापक सदस्य हुन् । निडर र साहसीको रुपमा अब्बल उनी खासगरी उत्पीडित समुदायको लागि कलम चलाउँछन् । विशेषगरी समाजमा हुने गरेका विभेद, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, विकृति, विसंगती तथा भ्रष्टाचारका विरुद्ध कलम चलाउँछन् र तीखो व्याङग्य समेत प्रहार गर्छन् । उनी सत्यको पक्षमा वकालत गर्छन् र कलम चलाउँछन् ।
राजनितिक आस्थाका आधारमा उनी ‘सम्मुनत संघीय समाजवाद’ का पक्षपाती हुन् । पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निकट उनी सोही पार्टी सम्द्ध संचार संगठन ‘प्रेस नेपाल’ का केन्द्रीय सदस्य छन् । तत्कालिन संघीय प्रेस युनियन इलामका संस्थापक अध्यक्ष रहेका उनले पछिल्लो समय संघीय प्रेस फोरम प्रदेश १ का उपाध्यक्ष समेत सम्हालिसकेका छन् ।
अध्ययनको क्षेत्रमा पनि उनी उत्तिकै अब्बल मानिन्छन् । २०६२ सालमा इभाङ माविबाट प्रथम श्रेणीमा एसएली उत्तीर्ण गरेका उनले महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलामबाट ‘ग्रामीण विकास’ विषयमामा स्नातकोत्तर (एम.ए.) गरेका छन् । कानुनी क्षेत्रमा समेत विशेष रुचि राख्ने उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानबाट कानुनमा स्नातक (एलएल.बी.) गरेका छन् । हाल उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राइभेट क्याम्पसबाट जनप्रशासन विषयबाट स्नातकोत्तर (एम.पी.ए.) गरिरहेका छन् ।
उनले विगतमा साधारण जागिरे जीवनको अनुभव समेत बटुलिसकेका छन् । तत्कालिन इभाङ गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा सामाजिक परिचालकको रुपमा नियुक्त भई सुरुवात गरेको जागिरे जीवन सामाजिक परिचालन कार्यक्रम संयोजक (मानव अधिकार मंच नेपाल इलाम/क्लास्टर २ इलाम) हुँदै तत्कालिन जिल्ला विकास समिति इलामका सामाजिक विकास अधिकृत भई काम गरेका छन् । सुरुमा उनी जीवनज्योति मावि इभाङमा शिक्षण पेसामा समेत संलग्न भए । हाल उनी एक सक्रीय सञ्चारकर्मी तथा एक कुशल प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेका छन् ।
५. अतित योङहाङ (अध्यक्ष, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च जिल्ला कार्यसमिति, इलाम)
अतित योङहाङ : अध्यक्ष, लिम्बू विद्यार्थी मञ्च जिल्ला कार्यसमिति, इलाम
अतित योङहाङ पेशाले हालसम्म यकिन रुपमा खुल्न सकेको छैनन् । उनी पत्रकार, समाजसेवी, विद्यार्थी नेता, व्यवसायी, जागिरे लगायत धेरै क्षेत्रमा देखिएका कारण उनी पेशाले चिनिन गारो छन् । खासगरी आफुलाई विद्यार्थी मात्र भन्न रुचाउने उनी सबै क्षेत्रमा उत्तिनै सक्रिय देखिन्छन् । उनी लिम्बू विद्यार्थी मञ्च जिल्ला कार्यसमिति इलामका अध्यक्ष हुन् । ७ वर्षे लामो लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा काम गरिसकेका उनी २ वर्ष यता इलाम जिल्लाको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनी काम र सक्रियताले अरुको रोजाईमा परिरहन्छन् ।
उनले नयाँ बुलन्द डटकमका उपसम्पादक भई राम योङहाङलाई सघाईरहेका छन् । माङसेबुङको इभाङमा जन्मेका उनी दर्जनबढी संघ, संगठनमा आवद्ध छन् । उनी नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. १ का सदस्य हुन् । उनी नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूमा समेत आबद्ध छन् । उनी आदिवासी जनजाति युवा महासंघ इलामका सदस्य हुन् । सुनुयुमा विकास संस्थाका सचिव, याक्थुङ लेखक संघ इलामका सचिव पनि समेत हुन् भने उनी लिम्बू पत्रकार संघसँग पनि आबद्ध छन् ।
कम्प्युटरमा सामान्य दखल राख्ने उनले करिव ५ वर्ष करार सेवामा सरकारी जागिर समेत गरिसकेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा खेलकुद कार्यालयमा प्राविधिक सहायकको रुपमा २०७१ सालमा प्रवेश गरी २०७३ सालदेखी २०७५ सम्म युवा समितिको कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर पदमा काम गरेका थिए । यसरी जीवनको सानो उमेरमै जागिरको अनुभव बटुलेका उनीमा नोकरी सम्बन्धी राम्रो अनुभव छ ।
उनले अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक गरेका छन् । हाल उनले मानविकिबाटै ग्रामिण विकासमा स्नातकोत्तर गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेस्टार लागू गरेपश्चात् अनिबार्य रुपमा कक्षा लिनुपर्ने कारण एकातिर, करार जागिरको समाप्ती अर्कोतिर संयोग भएको कारण हाल उनी अध्ययनसँगै सदरमुकाममा डेक्सटप सम्बन्धी सेवा हुने व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
६. अर्जुन योङहाङ (अध्यक्ष, याक्थुङ लेखक संघ जिल्ला समिति, इलाम)
अर्जुन योङहाङ :अध्यक्ष, याक्थुङ लेखक संघ जिल्ला समिति, इलाम
अर्जुन योङहाङ आफुलाई लेखक भन्दा पनि व्यवसायि बन्न र भन्न रुचाउँछन् । पेशाले समेत उनी युवा उद्यमी हुन् । कहिले बगैँचा रेष्टुरेण्ट इलामको सञ्चालक तथा प्रोप्राइटर भई व्यवसायमा सक्रिय देखिए त कहिले होमस्टे सञ्चालनमा व्यस्त देखिएका उनी सुरुमा नास्पाते खाजाघरमा व्यवसायिक देखिएका थिए । व्यवसायसँगै उनी लेखन र अध्ययनमा सौखी मानिन्छन् । उनी कम बोल्छन् र धेरै अध्ययन गर्छन् । इलाममा फरक आयामको जन्मसँगै जन्मिरहेका आयामका अभियानताहरुमध्ये उनी एक अभियानता हुन् ।
उनले हालसम्म फाटफुट कविता तथा लेखहरु मात्र लेखेका छन् तर उनलाई लेखक साहित्यकारहरुले एक श्रष्टाको रुपमा लिइसकेका छन् । उनी भरखर याक्थुङ लेखक संघ जिल्ला कार्यसमिति इलामको अध्यक्षमा निर्वाचित भई नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । उनी इलाम साहित्य समाजका सदस्य हुन् ।
अंग्रेजी साहित्यका विद्यार्थी उनले मरब क्याम्पस इलाममा स्नातक अध्ययनको क्रममा त्यहाँको सोसाईटी अफ इङलिस लिटरेचर समूह (सेल्स) को अध्यक्ष भई जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । खासगरी उनले त्यही जिम्मेवारीले साहित्यमा प्रवेश गर्न प्रेरित गरेका थिए । उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गदैछन् । हाल उनी कृषि पेशामा पशुपालन र नगदेवालीलाई प्रोत्साहन गरी त्यही पेशामा सक्रिय रहेका छन् ।
७. भिम योङहाङ (अध्यक्ष, याक्थुङ युवा मञ्च इलाम)
भिम योङहाङ : अध्यक्ष, याक्थुङ युवा मञ्च इलाम
भीम योङहाङ फाकफोकथुमको एकतप्पामा जन्मिएका हुन् । उनी याक्थुङ युवा मञ्च इलामका अध्यक्ष मात्र होइनन् लिम्बूवान पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन संघीय विद्यार्थी युनियन इलामका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले युनियनमा मरब क्याम्पस इलामको एक कार्यकाल समेत नेतृत्व सम्हालिसकेका हुन् । पछिल्लो समय लोक सेवा तयारी गरिरहेका उनी गाउँघरको काममा समेत उत्तीनै ब्यस्त देखिन्छन् । उनी उदाउँदो कवि हुन् । राम्रो कविता लेख्छन् ।
फरक अभियानका अभियानता उनी याक्थुङ लेखक संघ इलाममा समेत आबद्ध रही लेखनमा सक्रिय छन् । उनी लिम्बू विद्यार्थी मञ्च इलामका सहसचिव हुन् । उनले मानविकिबाट अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक गरेका छन् । हाल उनले औपचारिक अध्ययनलाई भने थाती राखेका छन् । उनले याक्थुङ युवा मञ्च इलामको संस्थापक अध्यक्ष भई काम गरिरहेका छन् । संगठनप्रतिको उनको लगाव र योगदान महत्वपूर्ण देखिन्छ ।